Mashiinka leysarka ee loo yaqaan 'CO2 Galvo laser' waxaa loo isticmaalaa xardhka, calaamadeynta iyo goynta dharka farsamada, dharka, maqaarka, kabaha, baabuurta, roogaga, warqada ciida, kaararka waraaqaha, xayeysiinta iyo warshadaha kale.
Ku qalabaysan CO2 RF il leysarka birta ah iyo madaxa farsamada sare ee Galvanometric, iyadoo la adeegsanayo saddex-dhidib firfircoon oo diiradda saaraya teknoolojiyadda galvanometer, nidaamka laserlas-ka ee 'Goldenlaser's Galvo laser' waa hoggaamiyaha warshadaha ee heerka tiknoolajiyadda.
Nidaamkeena leysarka Galvo waxaa loogu talagalay in lagu farsameeyo leysarka oo leh xajmiga ganaaxa, kala duwanaanta shaqada iyo dabacsanaanta sare Waxay leedahay astaamaha saxsanaanta sare iyo xawaaraha aan la qiyaasi karin marka la barbar dhigo nidaamka leysarka gantry (XY axis laser plotter).
Qaab No.: ZJJG-16060LD
Full Mashiinka Goynta Lasvo Laser iyo Calaamadeynta leh Camera
ZJJG-16060LD Galvo & mashiinka leysarka isku dhafan ee isku dhafan wuxuu qaataa waddo muuqaal oo duuleysa oo buuxa, kuna qalabeysan CO2 tubada dhalada iyo nidaamka aqoonsiga kaamerada. Waa nooc dhaqaale oo ka kooban marsho & rack wadista nooca JMCZJJG (3D) 170200LD.
Qaab No.: JMCZJ (3D) 160100LD
Mashiinka CO2 Galvo Laser oo leh Conveyor loogu talagalay xardho Goynta
3D firfircoon nidaamka leysarka Galvo
Hal mar oo wax soo saar ah 450 × 450mm
Awood u leh in si aan kala go 'lahayn u kala jaro illaa 1600mm
Isku duub si aad u rogto awoodda
Qaab No.: ZDJMCZJJG-12060SG
SuperLAB | XY Gantry & Galvo mashiinka leysarka leh CCD Camera
SuperLAB, calaamadeynta laser isku dhafan, xardho laser iyo goynta laser, waa xarunta CO2 laser processing a for non-metal. Waxay leedahay shaqooyinka meelaynta aragga, hal hagaajin muhiim ah iyo diiradda otomaatiga…
Qaab No.: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser xardho Mashiinka Mashiinka Goynta for Warshadaha Shoe
Xawaaraha ugu sareeya iyo qaabka waaweyn ee xardho laser, daloolin iyo goynta. Nidaamka wadista laba-geesoodka ah oo leh qaab-dhismeedka agab haya Nidaamka galvanometer filaayo.
Qaab No.: ZJJG (3D) 170200LD
Galvo Laser Goynta iyo Mashiinka Daloosha ee Dharka Jersey
Mashiinka leysarka badan ee goyn kara, xardhi kara, dalooli kara oo dhunkanaya-jarista funaanadaha, polyester, microfiber, xitaa dhar fidsan